Guddiga joogtada Baarlamaanka oo kulan ku leh Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho kulan ku yeelanaya Guddiga joogtada ah ee golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa looga hadli doonaa waqtiga uu furmaya Kal-fadhiga 5-aad ee golaha shacabka, kaasi la filayay inuu furmo 10-ka bishan, balse dib u dhac uu ku yimid, kadib markii magaalada Muqdisho uu booqasho ku yimid madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaacil Cumar Geele.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa labadii bil ee la soo dhaafay waxaa ay ku maqnaayeen fasax, iyagoona hada dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Kulanka marka uu furmo ayaa la filayaa in mudanayaasha Golaha shacabka ay baarlamaanka horgeeyaan warbixinada ay ka soo aruuriyeen deegaanada laga soo doortay oo mudooyinkii dambe ay joogeen.